Zlatan Ibrahimovic oo ka hadlay imaanshaha Jose Mourinho ee horyaalka dalka Taliyaaniga – Gool FM
Zlatan Ibrahimovic oo ka hadlay imaanshaha Jose Mourinho ee horyaalka dalka Taliyaaniga
Dajiye June 4, 2021
(Milan) 04 Juun 2021. Weeraryahanka kooxda AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic ayaa xilli ciyaareedka soo socda la filayaa inuu horyaalka Serie A kaga hor tago macallinkiisii hore ee Jose Mourinho kaasoo markiisii labaad xirfaddiisa leylin doono koox Taliyaani ah.
Labadan shaqsi ayaa kasoo wada shaqeeyay kooxaha Inter Milan iyo Manchester United, waana laba saaxiibbo oo inta badan isaga aragtiyo dhow kubadda cagta, waxaana Ibrahimovic uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu Jose kusoo laabto Serie A.
Waa loollan adag inuu Roma qabto, waxay u noqon doontaa sidaa aniga oo kale, waxa uu yimid koox aanan ka mid ahayn kooxaha ugu cad cad horyaalka” ayuu u sheegay La Gazzetta dello Sport.
“Ujeeddadaas darteed, waa wax qurux badan.
“Mou waa qof gaar ah, wax walba oo uu dhaho dunida ayay ku faafaan.
“Waa wax wanaagsan inuu Serie A yimid” ayuu hadalkiisa kusii daray Weeraryahanka reer Sweden.
Dhinaca kale, Ibrahimovic ayaa Milan ka caawiyay xilli ciyaareedkan inay ku dhammeysato boosaska afarta sare ee horyaalka iyadoo toddobo fasal kaddib ciyaari doonto tartanka Champions League sanad ciyaareedka dambe, waxaana uu sheegay inay Rosseneri iyo taageerayaasheeda xaq u leeyihiin kusoo laabashada tartanka Horyaallada Yurub.
Geeska Afrika oo guul ka gaartay kooxda Dekedaha kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League… +SAWIRRO
RASMI: Chelsea oo qandaraaska u kordhisay daafaceeda reer Brazil ee Thiago Silva